Pakistan: An-tapitrisany Tratry Ny Tondra-drano Ao Sindh, Tsy Misy Mpijery · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Septambra 2011 8:49 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, polski, 繁體中文, 简体中文, English
Ny tondra-drano namely an'i Pakistan tamin'ny 2010 dia namindràna toerana olona an-tapitrisa ary tena nampihemotra ny toekaren'ny firenena. Namely faritra midadasika izy ireny indrindra fa tany Khyber Pakhtunkhwa, Punjab sy Sindh ary niteraka fahafatesan'olona marobe. Na teo aza ireo fanambaràna maro niverimberina nataon'ny governemanta, tsy nisy dingana mivaingana noraisina hatreto mba hiatrehana ny mety ho fisian'ny tondra-drano amin'ny hoavy ary ny fiantraikan'io tsy firaharahiana io dia nandravaràva indray ny tondra-drano tamin'ity taona ity.
Tsy toy ny tamin'ny taona lasa, ny ivon'ilay zava-doza tamin'ity taona ity dia i Sindh izay namafàn'ny tondra-dranobe tanàna maro ary namindràna toerana olona an-tapitrisany. Araka ny Asian Human Rights Commission, na Kaomisiona Aziatika Momba Ny Zon'Olombelona, dia vinavinaina ho hatramin'ny 5.6 lavitrisa rupees ny fahavoazana noho ny fahaverezam-bokatra nateraky ny tondra-drano. Ny fitàran'ny tondra-drano dia azo refesina avy amin'ny zava-misy any amin'ireo distrika 23 any Sindh, 22 no tena voa mafy mivantana na ankolaka tamin'ity zava-doza ity.
Shahdadpur j hita avy eny ambony fiaramanidina, izay rakotry ny rano tondraka. Sary avy amin'i Rajput Yasir, copyright Demotix (18/9/2011).
Manakiana ny tsy fahampian'ny fandraisana andraikitra avy amin'ny governemanta mba hiatrehana ny zava-misy dia milaza ny lahatsoratry ny Human Rights Commission hoe:
Izao ny governemanta vao mba mijery ny toetoetr'ireo lakandrano sy ireo fitazonan-drano izay zara raha afaka miaty ny ranobe avy amin'ny tondra-drano. Mandritra izany fotoana izany dia olona anjatony maro no voafandriky ny làlana rakotry ny tondra-drano ary ireo zaza amam-behivavy no tena miharitra ny hirifiry ateraky ny tsy fisian'ny rano fisotro madio, ronono ary sakafo. Raha izay hita tamin'ny loza voajanahary tany aloha dia mitarazoka tokoa ny fandraisana andraikitra avy amin'ny governemanta noho ny tsy fahampian'ny ho enti-mihetsika sy ny rafitra vonjy aina mifanandrify amin'izany
Toy ny tamin'ny taona lasa, betsaka ireo fandraisana andraikitra ara-tsosialy no natomboka mba hanampiana ireo olona nafindra toerana noho ny tondra-drano. Isan'ireny ezaka ireny ny iray izay napetrak'i Faisal Kapadia sy Dr Awab Alvi, roalahy mafàna fo ara-tsosialy sady bilaogera ihany koa (ary mpanoratra ho an'ny Global Voices ).
Faisal, manoratra momba ny tanjona tratrarin'ny ezaka fanampiana ataony dia miteny ao amin'ny bilaoginy:
Ny fandaminanay tany ampiandohana dia ny hitondra sakafo masaka ho azy ireny ho an'ny 15 andro ho avy, mba hahafahan-dry zareo, farafahakeliny, manana vintana hiverina amin'ny fiainany vantany vao misinda ny ranobe
Lehilahy iray mitondra ny zanany miampita rano ho amin'ny toerana azo antoka. Sary avy amin'i Rajput Yasir, copyright Demotix (16/9/2011).
Mitondra fanehoan-kevitra mikasika ny fiantraikan'ilay tondra-drano i Faisal milaza hoe:
Velaran-tany midadasika amin'ny andaniny roa amin'ny arabe no ao anaty rano tanteraka izao. Niasa tamin'ny asa famonjena noho ny tondra-drano foana aho hatramin'ny taona 2010 ary dia lazaiko fa tsy mbola nahita ranobe toy ity aho nandritra ny androm-piainako. Tena henjana be ilay tondra-drano, ka tamin'ny faritra maro dia tsy misy tany mba hitan'ny maso. Raha ny marina, dia toy ny hoe manamory eny anivon-dranomasina izany no nahatsapako ny tenako – tena sady nampivarahontsana no nampivala-ketraka ilay izy.
Beena Sarwar, Pakistane iray mpanao gazety fanta-daza no sady mafàna fo, dia nanasongadina tao anatin'ny bilaoginy ireo asa famonjena. Ireo vondrona nasongadiny dia ahitàna ny Pakistan Medical Association, Indus Foundation Trust ary ny IRC. Lahatsoratra iray vao haingana momba ny tondra-drano no manome antsipirihany amin'ny fanavaozam-baovao avy ao Khairpur, faritra iray ao Sindh
Tsy misy foto-drafitrasa ara-pahasalamana, na izany avy amin'ny governemanta, na avy amin'ireo fikambanana ONG
Nirongatra be ny aretin-koditra, sery, aretim-bavony sy ny malaria.
Rano mihandrona no sotroin'ny olona, ary mitaky ny mba hahazo rano fisotro azo antoka.
Toeram-pivoahana vonjimaika no natsangana ary tsy ampy na tsy azo ampiasaina mihitsy ireo toeram-pivoahan'ny sekoly.
Ny fiarovana ireo faran'izay marefo, indrindra fa ny vehivavy sy ny ankizy no tena isan'ny olana fototra.
An-tapitrisany ireo tra-boina noho ireo tondra-drano manerana an'i Pakistan ka misy an'arivony maro ireo tsy maintsy nesorina tamin'ny tranononenany. Sary avy amin'i Rajput Yasir, copyright Demotix (7/9/2011).
Fa isan'ny tena mandreraka anatin'izany rehetra izany ny hoe sahala amin'ny tsy dia mahataitra ny media sy ny tontolon'ny bilaogy Pakistane ireo tondra-drano ireo. Marina fa misy ihany ny maningana saingy raha mitaha amin'ny hetsika goavana tamin'ny taona lasa, somary moana ihany ireo Pakistane mponin'ny aterineto.
Miresaka momba io tsy fisianà dom-berina io i Tazeen, Pakistane iray mafàna fo sady bilaogera, miteny ao anatin'ny lahatsorany mitondra ny lohateny hoe ‘Tondraka ny faritra Atsimo ary tsy miraharaha izany ny faritra sisa eto Pakistan”:
“Tamin'ity taona ity, maro ireo distrika tao Sindh sy Balochistan no mbola tratry ny tondra-drano hafa indray saingy tamin'ity indray mitoraka ity, na ny media, na ny vahoaka dia samy tsy nandray azy io ho zava-dehibe toy izay nataony tamin'ny taona lasa…Tsy nahita aho na dia toby iray monja aza, na izany tao Rawalpindi na tao Islamabad, naharay fanomezana ho an'ny ezaka famonjena any Sindh sy Balochistan…Hitako ho tena faran'izay manafintohina ny hoe ampahany maro ao Sindh sy Balochistan no milon-drano ary ny ambiny sisa ao Pakistan kosa tsy mihetsi-bolomaso amin'izany. Raha ny toy izany no tsy hamàhana tsy fahafaliana sy fanoherana, dia tena ho gaga aho.
Amin'izao fotoana izao, an'arivony ireo tra-boina no miandry sakafo sy famonjena. Manao tafo-lanitra ny zaza amam-behivavy, miandry ireo tompon'andraikitra mivantana mba hijery ny fitarainan'izy ireo. Indrisy anefa, toa tsy dia laharam-pahamehan'ny governemanta loatra izany.
Chowrangi dia manome lisitra tena tsara be misy ireo masoivoho mpanome fanomezana izay miasa fatratra tokoa hamonjena ireo tra-boina. Azo jerena ato ilay lisitra.